Ireo Tantara 14 Nalaza Indrindra tato Tamin’ity Taona 2014 ity? · Global Voices teny Malagasy
Ireo Tantara 14 Nalaza Indrindra tato Tamin'ity Taona 2014 ity?
Voadika ny 26 Desambra 2014 23:30 GMT
Vakio amin'ny teny русский, 日本語, polski, Español, English
Tomba-maso noforonina avy amin'ny Gephi nataon'i Gilad Lotan.
Tamin'ity taona ity izahay nisintona ny fifantohanareo tamin'ny fandraketana fanadihadiana momba ny heloka an'ady tao Gaza, nanongotra teorian'ny tetidratsy tamin'ny fidarabohan'ny MH17, nampiharihary ny prôpagandin'ady tany Krimea ary nampakatra ny tantara nihinana ny “bande passante” tany Karaiba.
Taonan'ny tantara vaovao ny 2014, ary nifantoka tamin'ny maizimaizina tao amin'ireo fandisoam-baovao tamin'ireo tantara nankalazaina hatraiza hatraiza izahay, ary nanohy hampivoaka amin'ny mazava amin'ireo tantara tsy mba misy mpitatitra manerana izao tontolo izao.
Indreto ary ny tantara 14 be mpitsidika indrindra tamin'ity taona 2014 ity [tamin'ny teny anglisy].
1. Miaramila Israeliana Mpanaporitsaka Tsiambaratelo nosamborina rehefa namoaka tao amin'ny Facebook fa ‘Mamono Sivily ao Gazà ho Valifaty ny Andia-Tafika Israeliana’ [mg] nosoratan'i Joey Ayoub ary nadikan'i Avylavitra
Tato anatin'ny andro vitsivitsy izay dia nisambotra sy naka am-bavany ahy ny manampahefana, mikasika ny asa fikarohana nataoko momba ny fampiasàna ireo fitaovam-piadiana tsy mifanaraka amin'ny lalàna tao Gaza, nobahanana ny mailaka sy ny kaontiko Facebook, Ary naharay torohevitra henjana be aho fa hoe tandindonin-doza ny aiko ka mila mangina sy milamina aho. Saingy tsy mankaiza tsy mankaiza aho. Mety hakaton-dry zareo indray ny fantsom-pifandraisako, saingy tsy midika izany hoe tsy eto aho, hahita làlana hatrany aho hampitàna ny vaovao ho any aminareo, ary matoky anareo aho amin'ny fampitàna azy, ento midina eny an'arabe izany. Ary takio amin'ireo solontenanareo, ny governemantanareo ny hampiatoany ny famatsiana io fandripahana amin'ny anaranareo io, bodoy Israely ary atsaharo ny fandatsahan-drà ao Gaza. Mijery anareo izao tontolo izao, an-dalam-panoratana ny tantara ankehitriny.
2. [Tandremo: Maherisetra] Lahatsary Avy Ao Gaza Mitatitra Ny Namonoan'ny Tifitra Bala Afomanga Israeliana An'i Ramy Ryan, Mpanao Gazety [mg] nosoratan'i Joey Ayoub ary nadikan'i Avylavitra
3. Fantaro Ilay Olon'ny Sarimiaina Vaovao Malaza Ao Krimea, Natalia Poklonskaya [mg] nosoratan'i Andrey Tselikov ary nadikan'i Mamisoa
Natalia Poklonskaya amin'ny endrika sarimiaina. Sary nifampizarana an-tserasera.
Nambabo ny fo sy ny sain'ny RuNety i Natalia Poklonskaya, mpampanoa lalàna vaovao notendren'ny governemanta mpisintaka ao Krimea, ary mahagaga fa nambabo an'i Japana ihany koa izy. Olona maherin'ny iray tapitrisa no efa nijery ny lahatsary Youtube misy azy nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny 11 Martsa, angamba noho ny endriny ivelany somary tanora (33 taona izy ankehitriny) miampy ny biraony izay hita fa matotra tokoa.
Lasa aingam-panahy hoan'ny mpankafy haikanto Japoney sy Rosiana ny tarehy malefaka saingy hentitra an'i Poklonskaya, miresaka amin'ny mpanao gazety ary voahodidina mikrô. Nalaina avy amin'ny manga (tantara an-tsarimiaina Japoney) ny ankamaroan'ireo sary ary miompana betsaka amin'ny endrika “mahafatifaty” na “kawaii” amin'ny vatan'i Poklonskaya.
4. Voafehin'i Kremlin Raha Propagandy, Fa Tsy Ny Photoshop: Fihomehezan'ny RuNet Manoloana ny Sary Hosoka MH17 [mg] Nosoratan'i Aric Toler ary nadikan'i Mamisoa
Ny sary nolazain'ny Fahitalavi-panjakana Rosiana ho porofo fa notifirin'ny voromby mpihaza Okraniana ny MH17. Pikantsary avy amin'ny 1tv.ru.
Mampiseho ny MH17 somary eny avaratr'i Donetsk voatifitr'ilay “voromby mpihaza”, voalaza fa an'i Okraina ilay sary, ary ahitana balafomanga eny an-dalana. Nizara ity vaovao ity avy hatrany ho porofo miharihary ireo bilaogera mpanohana ny Kremlin sy sampam-baovao Rosiana, ary nilaza fa tsy iadian-kevitra intsony izay nolavin'ny ankamaroan'ireo Tandrefana fa teti-dratsy. Na dia izany aza, araka ny fanamarihana avy hatrany nataon'ny mpiserasera rosiana marobe, tsara loatra ilay sary raha ho apetraka ho marina.
5. Israely, Gaza, Ady & Rakitra – Ny Fahaizana Mampifanaraka amin'ny tian'ny tena ny Propagandy nosoratan'i Gilad Lotan
Raha mirongatra eny an-kianja ao amin'ny tanin'i Gaza sy manerana ny lanitra Isiraeliana ny ady, dia misy ny adim-baovao mandravarava tokoa any amin'ny habakabaky ny tambajotra sosialy.
Tsy vitan'ny hoe be dia be ny fampitam-baovao novokarina, fa tonga aty amin'ny antsika haingana dia haingana tokoa izany, ary avy amin'ny loharanom-baovao maro kokoa. Koa satria manorina ny mombamomba antsika an-tserasera amin'izay zavatra efa fantatsika isika, amin'izay mahaliana antsika, ary izay nohafarantsika, dia ny tambajotra sosialy no mety amintsika indrindra hanamafisana ireo zavatra efa inoantsika. Sehatra efa natao hampifanarahana amin'izay tadiavina, nohamoraina ho amin'ny firotsahana, manao ho laharam-pahamehana ny votoaty mety hivoivoy bebe kokoa; Dia arakaraka ny hitendrentsika, izaràntsika, itiavantsika [hizaimevantsika] no hiakaran'ny firotsahana voatsongo dia ao amin'ny tolotra.
6. Mamelona ny Teorian'ny Tetidratsy ny Misiterin'ilay Fiaramanidina Malaysia Airlines MH370 [mg] nosoratan'i Jeff South ary nadikan'i Nancy
Mameno ny haino aman-jery sosialy ireo soso-kevitra kidaladala, ka ao ireo mpisera voasintona no nihevitra ny zava-drehetra hatramin'ny bemidina maizina ka hatramin'ny mazia mainty. Ataon'ny sasany fa zavatra tsy avy eto ambonin'ny tany, OVNI na filatsahanà zavatra avy any an'habakabaka no antony. Ny sasany indray niampanga ny mpampihorohoro na mety nahatifitra tsy nahy ka nampianjera ilay fiaramanidina sivily ny tafika Maleziana. Ny ankamaroany kosa dia mirona mankany amin'ny fiheverana fa tafapetraka soa aman-tsara ilay fiaramanidina ary mbola velona ireo mpandeha taminy.
7. Reny Nidaroka An-Janany, Lahatsary Niparitaka Be Tao Trinidad & Tobago [mg] nosoratan'i Jason Nathu ary nadikan'i Erikah
An unidentified mother and her twelve year-old daughter are the subject of the video, which has been posted and reposted on Facebook and other social networking sites. The video shows the mother hitting the child several times with a belt, after the child was alleged to have posted suggestive photographs of herself online.
Miparitaka be ao Trinidad sy Tobago ny lahatsary iray mampiseho ny fihevitry ny reny iray ny hoe ‘fifehezana’, niteraka fihetsehampo henjana teo amin'ny tontolon'ny bilaogy.
Reny iray tsy fantatra anarana sy ny zanany vavy roambinifolo taona no votoatin'ny lahatsary, izay nalefa ary naverina nalefa tao amin'ny Facebook sy tambajotra sosialy hafa. Mampiseho ilay reny mikapoka imbetsaka ilay zanany amin'ny fehikibo ilay lahatsary, rehefa voampanga ilay zaza fa nandefa ny sariny manaitaitra tanaty aterineto.
8. Te-Hampiasa Wi-Fi Ankalamanjana Ao Rosia? Mila mampiseho Pasipaoro Na KaraPanondro [mg] nosoratan'i Tetyana Lokot ary nadikan'i Mamisoa
Tsy afaka hampiasa onjam-pifandraisana eny amin'ny toeram-bahoaka tsy fantatra anarana intsony ireo mpiserasera ao Rosia. Hitaky amin'ireo olona miditra Wi-Fi ankalamanjana eny amin'ny toerana be olona ny governemanta Rosiana mba hampiseho pasipaoro na ny karapanondron'izy ireo. Hosoratana sy horaketin'ny mpamatsy aterineto ny mombamomba manokana ireo olona, ary tafiditra amin'izany koa ny adiresy MAC manokan'ireo fitaovana ampiasain'izy ireo.
9. Mampandohalika An'i Jamaika Ilay Otrikaretina Tsikongonià [mg] nosoratan'i Janine Mendes-Franco ary nadikan'i Ntsoa
Aretina misoko manerana an'i Karaiba amin'izao fotoana izao ny Tsikongonià, otrikaretina mahatonga fanaviana mahery vaika sy fanaintanan'ny vanin-taolana. Mifindra amin'ny alalan'ilay moka Aedes Aegypti mpitondra azy ilay aretina, ary mitombo hatrany ireo tranga vaovao manerana ny faritra.
Raha i Jamaika manokana izao dia toa sahirana tsy mahafehy ny fiparitahan'ilay otrikaretina sy ny tsy fahafantarana ny momba ilay aretina. Raha mampiasa ny tenifototra #chikungunya #caribbean (#Tsikongonià #karaiba) ireo mpampiasa Twitter, dia mizara vaovao mikasika ny fomba hanampian'ny fiovan'ny toetrandro ny fiparitahan'ilay aretina, momba ireo antotanisan'ireo matin'ny Tsikongonià isam-paritra, sy ireo zavatra
10. ‘Anonymous International’ Nanaporitsaka Ny baikon'i Kremlin amin'ny fahitalavitra rosiana nosoratan'i Kevin Rothrok
Efa ela ny fahitalavitra rosiana no efa nalaza ratsy ho manao ho bolokin'i Kremlin aeo amin'ny resaka politika. Mbola tsy fahita firy, anefa, ny ahafahan'ny vahoakamanopy maso ny firafitry ny fanaovana propagandy ao anatiny ao. Raha tena izy tokoa ny votoaty tafaporitsaka avy amin'ny “Anonymous International”, dia hahavinavina tsara izay ao ambadiky ny lamba fanakona-tsehatra ny Rosiana androany.
11. Nahitsin'ny TV -mpanjakana Rosiana Ny Tao Amin'ny Wikipedia Mba Hanamelohana An'i Okraina Mikasika Fidarabohan'ny Sidina MH17 [mg] nosoratan'i Kevin Rothrok ary nadikan'i Avylavitra
Nikisaka any anaty Wikipedia ny ady ao Okraina. Sary namboarin'i Kevin Rothrock.
Tsy atao mahagaga, ankehitriny mivoaka sy tonga any anaty Wikipedia ny lalaon'ny fifanilihana, toerana itoloman'ireo mpanitsy votoaty mba handraketany ireo adihevitra izay tena mampiseho tsara ny zoro isankarazany ijereny ilay tantara. Vao maraina tamin'ity maraina ity, ny fampidirana ho an'ny Wikipedia amin'ny fiteny Rosiana momba ny lozam-piaramanidina manao sidina ara-barotra dia nampiantrano karazam-pifandonana toy izany rehefa nisy olona manana adiresy IP avy any Kiev nanitsy ny filazàna momba ny MH17 hitenenana fa ny “mpampihorohoro” avy amin'ireo nitonon-tena ho Repoblika Entim-bahoakan'ny Donetsh no nanjera ilay fiaramanidina taminà bala afomanga BUK, azon'ireo mpampihorohoro avy tamin'i Federasiona Rosiana.” Tsy ampy ora iray taorian'izay, nosoloin'olona iray manana adiresy IP avy any Maosko tamin'ity fehezanteny ity ilay soratra, “Ny tafika Okrainiana no nitifitra ilay fiaramanidina.”
12.Fiaiken'ilay Iraniana Tezitra [mg] nosoratan'i Kambiz Hosseini ary nadikan'i Mamisoa
Mpanesoeso ara-politika Iraniana , mpilalao sarimihetsika, mpanolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra sy onjampeo i Kambiz Hosseini
Iraniana tezitra aho. Eny, alohan'ny maha-Iraniana ahy, lehilahy tezitra aho, tahaka ny lehilahy Afovoany-Atsinanana tezitra hitanao amin'ny fahitalavitra, ireo hitanao eny an-dalambe miaraka amin'ny totohondry mivonkona sy endrika mitebiteby mampiseho ny fanoheran'izy ireo. Tsy mba tezi-dava aho; saingy lasa tezitra. Ny nampiferinaina ahy sy nahatonga ahy ho lehilahy tezitra dia tamin'izaho nonina tao Iran. Eny tokoa, nisy fotoana, nihoatra ny fefy mahazatra ny fahatezerako ary nanomboka nihomehy aho hiavota-tena.Ny tiako ambara, tsy afa-ho tezitra tsy mihomehy ny fahatezerako aho.
Anio, hamadika ny fahatezerako ho tantara tsangana aho androany ary hihomehy amin'ny tebitebiko izay andavanandroko. Tsy mitsaha-mitombo isan'andro ireo antony mahatonga izany fahatezerako izany, ary noho izany, manana ny antony betsaka hihomezana ihany koa aho.
13. Mpihira iray Milaza ny Tanindrazany Guyana ho ‘Mahatra’ tao amin'ny Fahitalavitra Amerikana. Tokony Ho Diso Fanantenana ve ny Goyaney? Nosoratan'i Matthew Hunte
Pikantsarin'i Lisa Punch mihira ao amin'ny sehon'ny ABC “Rising Star” amin'ny alalan'ny YouTube.
Nidera an'i Punch ilay mpanoratra sady mpikatroka ara-kolotsaina mafàna fo Ruel Johnson noho ny faharetana nosedrainy tao anatin'ny toe-javatra sarotra. “Asa mafy tokoa ny nahatonga azy ho eo amin'ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao, dia ireo talentany manokana tsy mampino, fanohanana tsy miava vehana avy amin'ny reniny sy ireo namany, ary ny finoana ao aminy fa hahavita izany izy,” hoy ny nosoratany. “Tsy tokony hitabataba aminy amin'ny fanaratsiana sasany, amin'ny rediredim-pitiavan-tanindrazana te-hilaza zavatra tsara ihany isika , fa tokony ho nisaotra azy isika noho ny fanekeny antsika rehetra raha apetraka amin'ny lafiny fiarahamonin'olona sy ny nataon'ny lalàna.
14. Ilay Barikam-Pamanizana an-dalan'ny Hampitsahatra ny Famanizana Imasom-bahoaka ao India nosoratan'i Rezwan
Nahita vahaolana iray mety hampitsaharana ny famanizana imasom-bahoaka ao Mumbai ny “Clean Indian”, vondrona mpikatroka iray manohitra ny famanizana eny an-dalambe. Ilay vondrona, izay misarontava ny mpikambana ao aminy hanafenany ny mombamomba azy ireo, dia mivezivezy ao an-tanànan'i Mumbai miaraka amin'ny barika mavo lehibe ka manondraka rano ireo hitany mamany eny an-dalambe.